व्यवसायिक क्षेत्रको हित, विकास र विस्तारका लागि हाम्रो उम्मेदवारी : राजेन्द्र कुमार थापा « Salyan Today
यही फाल्गुन २९ गते हुने उद्योग बाणिज्य संघ सल्यानको निर्वाचनमा होमिएको प्रगतिशिल ब्यवसायिक प्यानल र संयुक्त प्यानलले चुनावी प्रचारप्रसारलाई तिव्रता दिएका छन् । अहिले उनीहरुले ब्यावसायिहरुसँग मत माग्दै घरदैलो अभियान सञ्चालन गरेका छन् । यसैक्रममा प्यानलको एजेण्डा, प्रतिबद्धता, चुनावी प्रचारप्रसार र आमब्यावसायिहरुले दिएको प्रतिक्रियाका बारेमा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षको समर्थनमा निर्वाचनमा होमिएको प्रगतिशिल ब्यावसायिक प्यानलबाट अध्यक्षका उम्मेदवार राजेन्द्र कुमार थापा (आर.के.) सँग सल्यान टुडेकर्मी बुद्धि पुनले गर्नुभएको कुराकानीको सार संक्षिप्त ।
सर्वप्रथम निर्वाचनमा जुटेको प्रगतिशिल ब्यावसायिक प्यानललाई सफलताको शुभकामना ।
-हस, धन्यवाद ।
फाल्गुन २९ गते हुनलागेको उद्योग बाणिज्य संघ सल्यानको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा तपाईले उम्मेदवारी किन दिनुभएको हो ?
-खासगरेर ब्यावसायिहरुको हकहितको लागी भनेर नै नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षको समर्थनमा प्रगतिशिल ब्यावसायिक प्यानल निर्वाचनमा जुटेको छ । ब्यावसायिहरुले भोग्दै आएका समस्या र विगत देखी नै उठाउदैँ आएका मागहरुलाई सम्बोदन गर्ने र ब्यावसायिहरु कै हितमा काम गर्ने भनेर नै मैले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको छु । सोही अनुसार हाम्रो प्यानल अगाडी बढेको छ ।
उसो भए ब्यावसायिहरुको हितको लागी प्रगतिशिल प्यानलले केके गर्छ त ?
-हामीले उद्योगी व्यवसायिहरु कै हितमा काम गर्ने हो । व्यावसायिक क्षेत्रको हित, विकास र विस्तारका लागि पनि उम्मेदवारी रहेको जानकारी गराउन चाहान्छु । ब्यावसायिक हकहित र अधिकारको सुनिश्चितता, स्वतन्त्र ब्यवसाय सुनिश्चित लगानी, निजि क्षेत्रको विकासमा प्रतिबद्धता भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै हामीले व्यवसायिक एकता, हकहित, पर्यटन, आर्थिक बिकास, व्यवसायिक सुरक्षाको लागी प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने छौँ ।
यहाँहरुले १६ बुदेँ प्रतिबद्धता पत्र पनि सार्वजनिक गर्नुभएको रहेछ, त्यसमा मुख्यत: के-के कुराहरुलाई समावेश गर्नुभएको छ ?
-हो, उद्योग बाणिज्य संघ सल्यानको निर्वाचनमा होमिएको प्रगतिशिल ब्यावसायिक प्यानलले १६ बुदेँ प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । बिशेषत: उद्योग वाणिज्य वचत तथा ऋण सहकारी संस्था स्थापना गरेर दश वटै स्थानिय तहमा शाखा कार्यालय स्थापना गरी ब्यावसायिहरुको हक र हितमा काम गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । हामीले जिल्लाको स्थानिय उत्पादनलाई वजारीकरण गर्नको लागी कोशेली घर निर्माणको लागी पहल गर्ने, कर सहायता कक्षको ब्यवस्थापन गरी ब्यावसायिहरुलाई कर सम्बन्धि जानकारी दिने, कर शिक्षा तालिम प्रदान गर्ने र पर्यटन प्रर्बद्धनमा टेवा पु¥याउने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेका छौँ ।
यस्तै जिल्लामा सभाहल निर्माणको लागी पहल गर्ने, कृषि, पशु तथा स्थानिय उत्पादनलाई ब्यवसायिकरण गर्दै वजारीकरणमा सहयोग गर्ने, जिल्लामा चिस्यान केन्द्र निर्माणको लागी पहल गर्ने, स्थानिय उद्योग, ब्यवसायलाई प्रर्बद्धन गर्न सहयोग गर्छौ । दर्ता विना नै सञ्चालन भएका ब्यवसायलाई दर्ता प्रक्रियामा लैजाने, सुन्दर र ब्यवस्थित वजार निर्माण गरिने, जिल्लाभरका सबै स्थानिय तहहरुमा कर निर्धारणमा एकरुपता ल्याउने तथा ब्यावसायिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न पहल गर्ने गरी प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छौँ ।
प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख भएका सबै कुराहरु पुरा गर्नुहुन्छ ?
-हो, हामीले प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेका सबै बुदाँहरुलाई पुरा गर्नको निम्ति हामी निर्वाचनमा जुटेका छौँ । हाम्रो प्रगतिशिल ब्यावसायिक प्यानलले यो निर्वाचन जित्छ र ती प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख भएअनुसार नै हामीले काम गर्छौ । हामीले सल्यानको निम्ति, जिल्लावासीको निम्ति काम गर्ने हो । हामीले देखेका सपनाहरु अधुरा हुदैनन्, पुरा गरेरै छोड्छौँ ।
अहिले तपाईहरु त चुनावी प्रचारप्रसारमा होमिनुभएको छ । ब्यावसायिहरुसँग मत माग्दै घरदैलो अभियानमा हुनुहुन्छ, ब्यावसायिहरु के भन्नुहुन्छ ? कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
-हामीले शुक्रवार देखी नै प्रगतिशिल ब्यावसायिक प्यानललाई विजयी वनाउन आग्रह गर्दै प्रचारप्रसारमा जुटेका छौँ । कपुरकोट गाउँपालिकाबाट शुरु गरेको प्रचारप्रसार तथा घरदैलो अभियान त्रिबेणी, कालिमाटी, बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिका, कुमाख, दार्मा गाउँपालिका हुदैँ बागचौर नगरपालिकामा समेत पुगिसकेका छौँ । यहाँले भने जस्तै यो विचमा धेरै अनुभव संगालेका छौँ । खासगरी ब्यावसायिहरु निकै उत्साहित हुनुभएको छ । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा हाम्रो पक्षमा ब्यावसायिहरुको लहर नै छ । हामीलाई काम गर्ने मान्छे चाहिएको हो, युवा पुस्ता चाहिएको हो भन्नुहुन्छ र प्रगतिशिल प्यानललाई नै विजयी वनाउनु पर्छ भनेर स्थानिय ब्यावसायिहरु नै प्रचारप्रसारमा जुट्नु भएको छ । यसर्थ, निर्वाचनको लागी हाम्रो माहोल राम्रो बन्दै गएको छ, हाम्रो जीत सुनिश्चित छ ।
निर्वाचनको बेला बिभिन्न खाले आश्वासन दिने तर जितेर गएपछि सबै कुरा बिर्सिने बढी हुन्छ भन्ने गुणासो सुन्नमा आउँछ, यस वारेमा के छ यहाँको धारणा ?
-सायद ब्यावसायिहरुले गरेको गुणासो स्वभाविक नै होला । किनभने कही कतै त्यस्तो भएको पनि हुनसक्छ । जसले ब्यावसायिहरुको पिडा बुझेको हुदैनन् नि उसले त्यसो गरेको होला । तर हामी प्रतिबद्ध भएर लागेका छौँ । झण्डै डेढ दुई दशक देखी ब्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छौँ, ब्यवसायिका समस्याहरुका बारेमा जानकार छौँ । हामी ब्यावसायिहरुको हित विपरितका कार्य गर्ने छैनौँ ।
-त्यस्तो केही छैन् । हामी प्रगतिशिल ब्यावसायिक प्यानल निर्वाचनमा हामिएको सबैलाई थाहा नै छ । हामीहरुलाई अमुल्य मत दिएर विजयी वनाउनुहुन सबै ब्यावसायिहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
हस, हामीलाई समय दिनुभयो, धन्यवाद ।
-म र हाम्रो प्रगतिशिल ब्यावसायिक प्यानलको वारेमा आमपाठक वर्गहरुको माझमा पु¥याउने चेष्टा गर्नुभएकोमा तपाई र सल्यान टुडे परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद ।